नालामा पनि सुबिधा सम्पन्न सद्भाव सामुदायिक हस्पिटल प्रा लि संचालन::KhojOnline.com
परको कुरा स्वास्थ्य
काभ्रेको उग्रचण्डी नाला एउटा यस्तो ठाँउ हो जहाका मानिसहरु साह्रे मेहिनती गर्दछन / मेहनत अनुसार मनग्य आय आम्दानि गर्दछन ।आम्दानीको नाफा नाला बाहेक अन्यत्र लगानी गर्दछन । यो भैरहेको एउतै कारण नाला भित्र अवसर खोज्न नसक्नु हो । लगानी गरेता पनि कोल्टे परेको स्थानले गर्दा र कृषि बाहेक अन्य काम गर्न सक्ने कामदार नभएको कारणले गर्दा कुनै पनि कामहरु सुचारु रुपले संचालन गर्न सकेको छैन । पछिलो समय यस क्षेत्रमा बिस्तारै कृषि बाहेक अन्य क्षेत्रको लगानी पनि आकर्षण हुदै आएको छ ।
यसै परिबेशमा आफुले सिकेका सीपलाई आफ्नो साल नाल गाडेको भूमिमा नै प्रयोग गर्छु भने बिशेष अभिलाषका साथ रेशम नेपाली उत्रनु भएको छ । उहालाई हामी नालाबासीहरुले सलाम गर्ने पर्छ । त्यति मात्र होइन उहालाई हामी सबैले होस्टेमा हैसे गर्ने पर्दछ । रेशम नेपाली सहित उहाको समुहले सद्भाव सामुदायिक हस्पिटल प्रा लि नाला बि.स. २०७३ साल चैत्र महिनामा स्थापना गरेर नालाबासीहरुको सेवा गर्नु भएको छ । उहा लगायत उहाको टोलीलाई धन्यबाद दिने पर्दछ ।
अधिकांश नालाको पसलहरुमा लोकल रक्सी बेच्न उद्दत भैरहेको अवस्थामा स्वास्थ सेवा दिन्छु अथवा स्वस्थ सेवा बेच्छु भने आँटका साथ कुल १५ बेडको करिब ८० लाख लागत लगायर अस्पताल खोल्नु सानो कुरा होइन । अझ आफ्नै अस्पतालमा ECG, video x- ray ,x ray family planing , lab test आदि सम्पूर्ण सेवा एउतै छाना मुनी उपलब्ध गराउनु भएको छ । जनरल मेडिसिन, भिजिटिंग अन्य डाक्टरहरु द्वारा जाच्ने सो अस्पतालमा शुल्क पनि न्यून रहेको छ।
जे होस् बेलैमा नालाको आवश्यकतालाइ पहिचाहन गरि अस्पताल खोलेकोमा यहाहरुलाई बधाई दिन्दै आउँदा दिनहरुमा अझै प्रगति पाथ तिर लम्किन्दै जाउन भने कामना सहर्ष यस खोज अनलाईन परिवार ब्यक्त गर्दछ ।
शनि, भदौ ९, २०७५ मा प्रकाशित
“युवा नेत्र सेवा” काे “नवाैं एक कप चिया दान” अभियान कार्यक्रम सम्पन्न
भनिन्छ पुण्य कमाउन टाढा जानु पर्दैन ,समाजसेवा गर्न धेरै पैसा खर्च गर्नु पर्दैन यसै भनाइलाई आत्म साथ गर्दै खोलेको संस्ठा हो युवा नेत्र सेवा /एक कप चिया बराबरकाे रकम दैनिक जम्मा गरेर दृष्टिविहीनलाई दृष्टि प्रदान गर्दै आएकाे “युवा नेत्र सेवा” काे “नवाैं एक कप चिया...
अनामणिबारे केही जिज्ञासाहरु
काभ्रे जिल्लाको उग्रचण्डी नाला गाबिस वडा वडा न.२ तुपिचा टोलमा बसोबास गरिरहेका नेवार समुदायको श्रेष्ठ परिवार अन्तर्गत रहेका एक जाति मध्य अनामणि श्रेष्ठ एक हो /यस परिवार निक्कै परिश्रमी र मेहनेती छन् /यिनीहरु बनेपा लाइकु वरपरबाट नालामा बसाइ सराइ गरेका हुन् /हालसम्म पनि यिनीहरुको देवाली बनेपा मायोज...
नक्षत्र अथवा नक्षत्र मास भनेको के हो ?
आकाशमा रहेका ताराहरुको समुह नै नक्षत्र हो / नक्षत्र, सूर्य र चन्द्रमाको गति अनुसार हिन्दुहरुको कालगणना अथवा समयको निर्धारण गरिएको हुन्छ । अझ भन्ने हो भने यसमा नक्षत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ /आकाशमा जम्मा २७ नक्षत्रको गणना गरिएका छन् / नक्षत्र तथा नक्षत्र मास जानु भन्दा पहिला सुर्य र चन्द्र मास बारे बुझौ...